Rita, Writing for My Sake!: အေပရယ်
အေးစက် ရင့်ရော်ခြင်းတွေ ကွာကျ
ကြည်စင် ဝင်းပလာတဲ့ သမယ။
ကပ်ငြိနေတဲ့ အရာရာကို ခွာချ
အဝါရောင်ရိပ်တွေ လူးလွန့် လှုပ်ရှား
Posted by Rita at 4/01/2011 01:03:00 PM
Happy Birthday to Rita!!!
bd မဟုတ်ပါဘူးဆို ပေါက်
(တစ်နေ့မဟုတ်..တစ်နေ့တော့ မွေးနေ့နဲ့ တိုးမှာပဲလေ...ဟင်းဟင်းး)
ထူးထူးဆန်းဆန်း ကဗျာတွေ ဘာတွေ ရေးလို့
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ (ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်)ဖြစ်ပါစေ
happy merry un-birthday to u
ဖောင်ဖြည့်ရမယ့်ကိစ္စ ပျင်းရင် တို့ ကူပေးမယ်။
ိသိုင်းကျူး ကျော့ =)
နေခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေကို ခဏဖြစ်ဖြစ် ရောက်အောင်ပြန်မယ်။ အဲဒီနေရာတွေမှာ နေခဲ့တုန်းက အမှတ်တရနေရာတွေကို ရောက်အောင် ပြန်သွားမယ်။ လျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့လမ်းတွေကို ပြန်လျှောက်ကြည့်မယ်။ ပြန်ကြည့်မြင်ချင်သေးတဲ့ အရာတွေကို ပြန်ကြည့်ရမယ်။
ကိုယ်လည်း တူတူပဲ။ အဲလိုပြန်သွားကြည့်ချင်တာ။ အလွမ်းတွေတော့ ပါလာဦးမှာပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ ရီတာဘယ်ကိုသွားလည်မလို့လဲဟင်။ ထိုင်ဝမ်လားးးး? ဒီက မဖြေချင်ရင် ဖဘကနေ တိုးတိုးလေး လှမ်းပြောလိုက်နော်။ :D
အို..ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်ဘဲဥကွဲသွားပြီ။ :P
တကယ်တော့ နေရာဟောင်းတွေ ပြန်သွားဖို့က သိပ်ခက်လှတယ် မဟုတ်ဘူး ဇွန်။ အဲဒီနေရာတွေကို သွားဖို့ သယ်သွားရဦးမယ့် အရာတွေ၊ အဲဒီနေရာတွေမှာ ပြန်တူးဖော်ရဦးမယ့် အရာတွေ၊ အဲဒီနေရာတွေက အပြန်မှာ သယ်လာရဦးမယ့် အရာတွေ... ကိုယ်တော့ အဲဒါတွေကို မသိစိတ်ထဲက ရှောင်ချင်နေတာများလား မသိဘူး။